Usama Hooyadii Oo Afka Furatay: “Wiilkeyga Waa la iga Duufsaday, Xad-dhaaf ayuu ii jeclaa, Dad ayaa Sixray Oo uu ka hari waayey..?” | Afrikada
Usama Hooyadii Oo Afka Furatay: “Wiilkeyga Waa la iga Duufsaday, Xad-dhaaf ayuu ii jeclaa, Dad ayaa Sixray Oo uu ka hari waayey..?”
Afrikada, London: Hogaamiyihii Al-Qaacida marxuum Usaama Bin Laadin hooyadii Caaliya Qaniim (Alia Ghanem) ay hadashay markii ugu horeysay tani iyo bishii May 2011-kii, iyada oo haatan sheegtay in uu ahaa wiil iyada baari u ahaan jirey.
Caaliya ayaa u sheegtay wargeyska ‘The Guardian’ in ay xasuusan karto in Usaama uu ahaa wiil xishood badan muddo kadibna noqday nin xoog leh, kaasi oo xubnaha bulshada caan ka noqday xilliyadii da’diisa 20 jirnimo.
Waxa ay ku qeexday in uu ahaa canug aad uga soo dhalaali jirey wixii loo diro balse si uun markii dambe wax ka noqdeen oo ka lumay wadadii caadiga aheyd ee uu ku taagnaa, waxaa ay hooyadu sheegtay in Usama aan looga horeynin markii uu galay jaamacadda King Abdulaziz University ee magaalada Jeddah ee boqortooyada Sacuudiga, halkaasi oo uu ka dhiganayey duruusta cilmiga dhaqaalaha.
“Dad ayaa wiilkeyga kula kulmay jaamacadda waxaana ay bedeleen dabeecadiisii iyo fekerkisii. Waxaana uu iska bedelay sidii aan ku ogaa.” sidaa waxaa tiri hooyadii.
Hooyada ayaa sheegtay in intii uu baranayey cilmiga Dhaqaalaha uu Usaama la kulmay dad uusan garaneynin kuwaasi oo u sheegay waxyaalo kala gedisan isla markaasina waxa ay bedeleen xaaladiisii guud iyo dhaqankiisii.
“Waxa uu ahaa wiil yar oo wanaagsan ilaa ay is arkeen Shaqsiyaad ay isku barteen jaamacadda kuwaasi oo u muuqday kuwo maskaxda ka bedelayey intii uu jirey da’da 20-ka” ayey tiri.
“Waa ay soo raaci jireen kadibna waxa ay heleen lacag ay fekradooda ku maalgeliyaan, mar walba waxaan ku waanin jirey in uu isaga haro dadkaas, mana uusan ii qiran jirin waxyaalaha uu sameynayey sababtoo ah aad ayaa uu ii jeclaa.”
Majalada The Guardian ayaa ku warbixineysa in Usama, isaga oo jaamacadda dhiganaya in uu la kulmay ninka lagu magacaabo Cabdallah Cazzaam, oo ahaa xubin ka mid ah ururkii Ikhwaanul Muslimiin, kaasi oo muddo kadib isagu musaafuriyey wadanka Sacuudiga kalana talin jirey Usaama dhanka caqiidada.
Hooya Caalia ayaa sheekadeeda ku sii dartay in nolosheedu ay noqoneysay mid sii adkaata sababo la xiriira wiilkeeda curadka ah oo mar waliba ka fogaan jirey.
Markii ugu dambeyay ee qoysku arkaan Usaama ayaa waxa ay aheyd sanadkii 1999-kii oo ay ku arkeen wadanka Afgaanistaan, sanadkaasi oo ay halkaasi ku booqdeen labo jeer, isaga oo jooga goob saldhig ah oo banaanka ka ah magaalada Kandahar.
Waxa ay aheyd meel u dhow gegida diyaaradaha halkaasi oo ay Raashiyaanka ka qabsadeen” ayaa ay tiri Caaliya.
Si kastaba, Wiil ay ila adeer yihiin Usama ayaa lagu magacaabo Axmed ayaa sheegay in hooyadu ay weli inkireyso dhibaatada wiilkeedu sameeyay , sababo la xiriira in ay weli aad u jeceshahay.
“Taas bedelkeed, waxa ay eedenaysaa dadka isaga dhinacyadiisa joogey. Iyadu waxa ay ogsoon tahay qeybtiisa fiican oo keliya, ma ay aragto waxa aynu innagu arkeyno. Ma ay rabto in ay ogaato Qeybtiisa Jihaad-doonnimada,” ayaa uu Axmed u sheegay The Guardian.
Waxa uu qiray in dhammaan Usaama walaalihiis ay ka xishoodeen ficilladiisa ayna ogaayeen in uu ku sii socdo waddo musiibo ah, isla markaasina uu ficilladiisa ay muujinayeen in uu halis gelinayey cawaaqibtiisa dambe.
Axmed ayaa sheegay in dhammaan xubnaha qoysku ay isaga noqdeen wadanka Sacuudiga halkaasi oo markii ay ku laabteen dowladdu su’aalo weydiisay, waqtigaasi oo laga mamnuucay qoyska in ay dalka ka baxaan.
Ku dhowaad labo dersin oo sanado ah (20 sano) ayaa ay qooyska reer Laden haatan loo ogolaaday in ay caalamka u socdaali karaan iyagoo ka bixi kara dalka boqortooyada Sacuudiga.
Qoyskan ayaa ka mid ah qoysaska ugu taajirsan boqortooyada wadanka Sacuudi Caraabiya.
The Guardian, Tarjumaadii Burhan Piccolo